Special Report | BETV Myanmar
Get Your Daily Trustiest Business Information
Monday, 21 Oct 2019
Talk to BETV
Embedded video for Yangon360 l ၀န်ကြီးများရုံး ပြန်လည်အသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာတဲ့အပေါ် လူကြီး လူငယ် ဘယ်လိုမြင်ကြသလဲ
Yangon360 l ၀န်ကြီးများရုံး ပြန်လည်အသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာတဲ့အပေါ် လူကြီး လူငယ် ဘယ်လိုမြင်ကြသလဲ
Sep, 22 2019
အရင်က အာဇာနည်နေ့မှာပဲ ၀င်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ အတွင်းဝန်ရုံး-၀န်ကြီးများရုံးဟာ ရန်ကုန်မြို့က တိတ်တဆိတ် အဆောက်အဦတစ်ခုပါ။ အခုတော့ ပြခန်းတွေ အရောင်းပြခန်းတွေရယ် ကော်ဖီဆိုင်တစ်ချို့နဲ့ ပြန်လည်လှုပ်ရှားအသက်ဝင်လို့ လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီအပေါ်မှာ အမြင်မတူတာတွေမျိုး တစ်ချို့ ရှိနေပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကိုတော့ Yangon360 (ရန်ကုန်တစ်ခွင်) အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
#Yangon360 #TheSecretariat #Sunday10Am
Embedded video for Yangon360 l ဘတ်(စ)ကားမှတ်တိုင် ဈေးဆိုင်ခန်းတွေ တည်ဆောက်မယ့်အပေါ် အမြင်မတူတာတွေ ရှိနေဆဲပါ
Yangon360 l ဘတ်(စ)ကားမှတ်တိုင် ဈေးဆိုင်ခန်းတွေ တည်ဆောက်မယ့်အပေါ် အမြင်မတူတာတွေ ရှိနေဆဲပါ
Sep, 08 2019
ဘတ်(စ)ကား စီးနင်းခ ငွေပေးချေစနစ်- YPS ကဒ်တွေကို မကြာခင် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ နီးစပ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေအလွယ်တကူ ဖြည့်သွင်းလို့ရအောင် ငါးပေပတ်လည် ဆိုင်ခန်းတွေကို ဘတ်(စ) ကား မှတ်တိုင်နံဘေး လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာ တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဈေးဆိုင်ခန်းတွေ တည်ဆောက်မယ့်အပေါ် အမြင်မတူတာတွေ
လည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Yangon360 (ရန်ကုန်တစ်ခွင်) အစီအစဉ်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
#Yangon360 #YPS #YBS #YCDC
Embedded video for Yangon 360 ၊ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ စမတ်ကားပါကင်၊ ဘယ်တော့ဖြစ်လာမှာလဲ?
Yangon 360 ၊ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ စမတ်ကားပါကင်၊ ဘယ်တော့ဖြစ်လာမှာလဲ?
ရန်ကုန်မှာ ကားအသုံးပြုမှု များပြားလာတာနဲ့အတူ ကားပါကင် ရှားပါးမှု ပြဿနာကလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာနေပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စာရင်းတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ (၈) သိန်းကျော်ရှိပြီး အဲဒီထဲက (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းဟာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ ရှိနေတယ်လို့ လေ့လာရပါတယ်။
Embedded video for Yangon360 l ဤခရီး နီးသလား
Yangon360 l ဤခရီး နီးသလား
Aug, 25 2019
ရန်ကုန်မြို့မှာ မြို့တွင်းနဲ့ ဆင်ခြေပုံးရပ်ကွက်တွေကို ခရီးသွားလာဖို့ မီးရထားကို အသုံးပြုတဲ့ လူဦးရေအရေအတွက်ဟာ မြို့လူဦးရေရဲ့ (၅) ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာရှိတယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ စာရင်းတွေအရ သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့် ရထားစီးခရီးသည် အရေအတွက် နည်းပါးနေရတာပါလဲ? ဘယ်အချိန်မှာများ မီးရထားကို အဓိကထား အသုံးပြုလာကြမှာလဲဆိုတာကို ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Yangon360 (ရန်ကုန်တစ်ခွင်) အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
#Yangon360 #Circulartrain #Railway #Sunday10Am
Embedded video for Yangon360 l မိုးကြီးတိုင်း ရေကြီးတတ်တဲ့ ရန်ကုန်ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ခဲ့ကြသလဲ
Yangon360 l မိုးကြီးတိုင်း ရေကြီးတတ်တဲ့ ရန်ကုန်ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ခဲ့ကြသလဲ
Aug, 18 2019
အခြား ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးက မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်အချိူ့လိုပဲ ရန်ကုန်ဟာ မိုးကြီးတိုင်း ရပ်ကွက်နဲ့ လမ်းမတွေမှာ ရေကြီး ရေလျှံလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ ရန်ကုန်မှာ ရေကြီး ရေလျှံတာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် သက်သာသွားပြီလို့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဘက်က အတိအလင်း ဆိုထားပါတယ်။
ဘယ်လိုတွေ ကာကွယ်ခဲ့ရပါသလဲ? Yangon360 (ရန်ကုန်တစ်ခွင်) အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
#Yangon360 #Yagonflood #Sunday10Am
Embedded video for Yangon360 l တွင်ကျယ်လာတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းဈေးကားတွေ
Yangon360 l တွင်ကျယ်လာတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းဈေးကားတွေ
Aug, 11 2019
တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ရလွယ်ကူပြီး နေရာထိုင်ခင်းအတွက် သိပ်ပြီး ပူပန်စရာမလိုတဲ့ ကားတွေနဲ့ ဈေးရောင်းချလာတာဟာ ရန်ကုန်မြို့မှာ တွင်ကျယ်လို့ လာနေပါပြီ။ ဒါဟာ လမ်းဘေးမှာ ခုံချပြီး ရောင်းချတဲ့အခါ စည်ပင်သာယာက လိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ကားနဲ့ ရောင်းချဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်
လို့ တစ်ချို့က ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ ရောင်းချဖို့ဆိုတာ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထားတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှသာ ရောင်းချခွင့်ရှိတာပါ။
Embedded video for Yangon360 l ရန်ကုန်မှာ သေဆုံးမှုများနေတဲ့ H1N1 (စိုးရိမ်ရမယ့် အခြေအနေလား)
Yangon360 l ရန်ကုန်မှာ သေဆုံးမှုများနေတဲ့ H1N1 (စိုးရိမ်ရမယ့် အခြေအနေလား)
Influenza A (H1N1) pdm 09 တုပ်ကွေးရောဂါပိုးကြောင့် အခုဆိုရင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ သေဆုံးသူ (၇၂) ဦးအထိ ရှိလာနေပြီး အဲဒိပမာဏထဲက (၅၆) ဦးဟာ ရန်ကုန်ကပါ။
Embedded video for Yangon360 l ရန်ကုန်မှာ စက်ဘီးစီးဖို့ လွယ်ကူရဲ့လား
Yangon360 l ရန်ကုန်မှာ စက်ဘီးစီးဖို့ လွယ်ကူရဲ့လား
Jul, 22 2019
လူနေထူထပ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လမ်းမတွေဟာ မော်တော်ကားတွေနဲ့ အမြဲပိတ်ဆို့လျက်ရှိပါတယ်။
တစ်ချို့ကတော့ စက်ဘီးတွေကို စီးပြီး ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုဒဏ်ကို ဖြေရှင်းချင်နေကြတာပါ။
Embedded video for Yangon360 l ရန်ကုန်ဈေးတွေကို ဘယ်လို အဆင့်မြှင့်တင်ရင် ကောင်းမလဲ
Yangon360 l ရန်ကုန်ဈေးတွေကို ဘယ်လို အဆင့်မြှင့်တင်ရင် ကောင်းမလဲ
Embedded video for Yangon360 ၊ ရန်ကုန်ရဲ့ နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်တွေမှာ အမှိုက်ကင်းစင်သွားပြီလား
Yangon360 ၊ ရန်ကုန်ရဲ့ နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်တွေမှာ အမှိုက်ကင်းစင်သွားပြီလား
အမှိုက်တွေပြည့်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကို ပြုပြင်ပြီး လမ်းကြားဥယျာဉ်အဖြစ် ဖန်တီးခဲ့တာ ခုဆိုရင် နှစ်နှစ်ကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုက်ခန်းပေါ်မှာ နေထိုင်တဲ့သူတစ်ချို့နဲ့ လမ်းကြားကို လာရောက်လည်ပါတ်ကြသူ တစ်ချို့ရဲ့ စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုတွေကြောင့် တစ်ချို့ နောက်ဖေးလမ်းကြား ဥယျာဉ်တွေဟာ အမှိုက်တွေနဲ့ ပြန်လည် ပြည့်နှက်လာပါတယ်။
GET UP TO DATE NEWS FOR FREE
Find out ﬁrst about new and important news
ADVERTISE WIYH US
2018 copyright ©. All rights reserved.
Jobs at BETV
Powered by CREATiVE.